December 19, 2020 - Khitalin Media
December 19, 2020 by Khitalin Media
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာများ တွက်ချက် ဟောကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။ ဟောစာတမ်း / baydin / ဗေဒင် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ရန်များတာ စကားများတာမျိုးတွေ ရွှေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ကြုံတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ကူညီမှုနဲ့လဲ လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ စာရင်းဇယားကိစ္စ ပစ္စည်းများနဲ့ ပက်သက်တာများ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား နိုင်ငံခြားသားများနှင့် … Read more
အတိတ်နိမိတ်- သင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းက သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်
အတိတ်နိမိတ်- သင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းက သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ် ပိုက်ဆံမရွိဘူးလို့ ပါးစပ်ကအမြဲပြောနေရင် တေန့တခြား ကြပ်တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ်၊ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနေတွးနေရင်ပိုပြီး အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမဟုတ်ဘူး ဘာသာရေး အေတွးမဟုတ်ဘူး။ Psycho သေဘာပဲ ကြားရဖန်ျမားရင် အေတွးတွေဖြစ်လာတယ်။ ပြောပျါမားရင် အာ့အတိုင်း ယုံကြည်လာတယ်။ ကြာတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက အတိုင်းကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကားတွေ အတိုင်းကိုယ့်ဘဝက ပြောင်းသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်း အေကာင်းဘက်က တွေးပါ။ အေကာင်းဘက်ကို တွေးပါ အောင်မြင်သူလိုတွေးပါ။ အောင်မြင်သူတွေနား ချဉ်းကပ်ပါ လို့ပြောကြတာပေါ့။ လဲကတြာဟာ ပြသနာမဟုတ်ဖူးလေ။ ပြန်မထ ချင်တော့တာ or ငါ ပြန်မထနိုင်လောက်ပါဘူးလို့တွေးတာ လက်လြှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကသာ ပြသနာကြီးပါ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာထက် ဖြစ်အောင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲတွေးဖို့ ပိုလိုတာပါ။ လူတိုင်းမွာ ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရွိတယ် ဖြေရွင်းပုံပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေရဲ့ ဘဝအခြေအနေတွေကွာသွားတာပါ။ … Read more
မျက်ခုံးမွှေး ထူထူလေးဖြစ်ဖို့ (၁၀) ရက်အတွင်း သိသာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေးဖြစ်ဖို့(၁၀)ရက်အတွင်းသိသာစေမယ့်သဘာဝနည်းလမ်းခပ်ထူထူလေးရှိတဲ့မျက်ခုံးမွှေးမျိုးကိုပျိုမေတိုင်းလိုချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။ အခုခောတ်ဆိုရင်မျက်ခုံးမွှေးကိုTattooထိုးတာတွေတောင်လုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝမျက်ခုံးမွှေးအလှနဲ့မယှဉ်နိုင်တာကိုတော့ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ အရည်အသွေးညံ့တဲ့မိတ်ကပ်တွေလိမ်းတာကြောင့်လည်းမျက်ခုံးမွှေးပါးလာစေပါတယ်။မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေးရဖို့သဘာဝအတိုင်းမိမိအိမ်မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မဲနည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း၁။သံလွှင်ဆီ၂။သံပုရာသီးတစ်စိပ်ပြုလုပ်နည်း၁။သံပုရာသီးတစ်စိပ်ကို ခွက်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီးသံလွှင်ဆီစားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်းကနေ ၅ ဇွန်းထိ ထည့်ပါ။၂။ အဲဒီနောက် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်နဲ့ အုပ်ပေးထားပြီး၅ရက်လောက်ထားပါ။ ၃။အဲဒီအရည်ကိုမျက်ခုံးမွှေးပေါ်ညတိုင်းလိမ်းပေးပါ။၄။တစ်ညလုံးထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုး၃ပတ်၎ပတ်လောက်လုပ်ပေးပါ။ပထမ၁၀ရက်အတွင်းသိသာတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Credit Unicode မကျြခုံးမှေး ထူထူလေးဖွဈဖို့ (၁၀) ရကျအတှငျး သိသာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး မကျြခုံးမှေးထူထူလေးဖွဈဖို့(၁၀)ရကျအတှငျးသိသာစမေယျ့သဘာဝနညျးလမျးခပျထူထူလေးရှိတဲ့မကျြခုံးမှေးမြိုးကိုပြိုမတေိုငျးလိုခငျြကွတယျမဟုတျလား။ အခုခောတျဆိုရငျမကျြခုံးမှေးကိုTattooထိုးတာတှတေောငျလုပျလာကွတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့သဘာဝမကျြခုံးမှေးအလှနဲ့မယှဉျနိုငျတာကိုတော့ငွငျးပယျလို့မရပါဘူး။ အရညျအသှေးညံ့တဲ့မိတျကပျတှလေိမျးတာကွောငျ့လညျးမကျြခုံးမှေးပါးလာစပေါတယျ။မကျြခုံးမှေးထူထူလေးရဖို့သဘာဝအတိုငျးမိမိအိမျမှာအလှယျတကူပွုလုပျနိုငျမဲနညျးလမျးလေးကိုမြှဝပေေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ပါဝငျပစ်စညျး၁။သံလှငျဆီ၂။သံပုရာသီးတဈစိပျပွုလုပျနညျး၁။သံပုရာသီးတဈစိပျကို ခှကျတဈလုံးထဲထညျ့ပွီးသံလှငျဆီစားပှဲတငျဇှနျး ၄ ဇှနျးကနေ ၅ ဇှနျးထိ ထညျ့ပါ။၂။ အဲဒီနောကျ ပနျးကနျပွားတဈခပျြနဲ့ အုပျပေးထားပွီး၅ရကျလောကျထားပါ။ ၃။အဲဒီအရညျကိုမကျြခုံးမှေးပျေါညတိုငျးလိမျးပေးပါ။၄။တဈညလုံးထားရငျပိုကောငျးပါတယျ။အဲဒီလိုမြိုး၃ပတျ၎ပတျလောကျလုပျပေးပါ။ပထမ၁၀ရကျအတှငျးသိသာတဲ့ရလဒျကောငျးကိုရရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ Credit
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျအသကျပေးမတတျ ခဈြနပေမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဝေးရမလိုဖွဈနတေဲ့ ခဈြသူတှအေတှကျ
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျအသကျပေးမတတျ ခဈြနပေမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဝေးရမလိုဖွဈနတေဲ့ ခဈြသူတှအေတှကျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အသကျပေးမတတျ ခဈြနကွေပမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဝေးရမလိုဖွဈနတေဲ့ ခဈြသူတှေ. ဘဝခရီးကို ရာသကျပနျလြှောကျလှမျးနိုငျဖို့ ယတွာ.လိုအပျတာတှကေ.. ၁။ ရတေျောကပျလှူဖို့ ဖနျခှကျအကွညျ ၂လုံး ၂။ ပနျးကနျပွား အလတျ( quater plate)၁ခပျြ ၃။အပွဈအနာအဆာကငျးတဲ့ စှယျတျောရှကျ ၁ ရှကျ ။ ဆောငျရှကျရမှာက ၁။ အပွဈအနာအဆာကငျးတဲ့ စှယျတျောရှကျ ၁ ရှကျကို ဖုံနဲ့ အညဈအကွေးတှေ သသေေ ခြာခြာသနျ့စငျပွီး ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ မှေးနံနဲ့ နာမညျတှကေို စှယျတျောရှကျရဲ့ ရှကျလှာတဈလှာစီမှာ ရေးရမယျ ။ ဥပမာ။ ။ တနင်ျဂနှသေား အောငျအောငျ ကို ဝဲဖကျရကျလှာမှာ ရေး ကွာသပတေးသမီး … Read more
ဆောင်းရာသီမှာ နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၅) ခု
ဆောင်းရာသီမှာ နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၅) ခု ဆောင်းရာသီမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေထဲမှာ နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲတာကလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲလို့ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အခု ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေက အသုံးတည့်စေမှာပါ။ (၁) သခွားသီး မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့အခါ အသုံးပြုကြတဲ့ သခွားသီးစိတ်လေးတွေကို နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့အက်ကွဲတဲ့ အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ သခွားသီးစိတ်လေးတွေ ကပ်ထားပေးရုံနဲ့ ရေဓာတ်ကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးပြီး စိုပြည်ချောမွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အုန်းဆီ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ရှိကြတဲ့ အုန်းဆီဟာဆိုရင်လည်း နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့ အက်ကွဲခြင်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝပစ္စည်းတမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း အုန်းဆီကို … Read more
ချစ်ပေးတယ်ဆိုတာလေ.. တစ်နေ့သုံးခါဖုန်းဆက်တာကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ ညတိုင်းစကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြောနေမှ..ချစ်တာမဟုတ်ဘူး..။ နှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက်တွေ့နေမှ..ချစ်တာမဟုတ်ဘူး…။ နေမကောင်းတဲ့အခါ..ဖုန်းလေးနဲ့ဘာဆေးသောက်နော်ဆိုတာလည်း ချစ်ပေးတာမဟုတ်သလို…။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မသွားနဲ့… ညနက်တဲ့ထိ လျှောက်လည်နေရင် စိတ်ဆိုးပြီး… ငါမကြိုက်တဲ့ စီးကရက်တွေမသောက်နဲ့ နင့်ကိုချစ်လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဆိုတာလည်း ချစ်တာမဟုတ်သလို…. နင်တစ်ခုခု လုပ်ပါလားစိတ်ဓာတ်ပဲ ကျမနေနဲ့လေဆိုတာကလည်း ချစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး…။ ချစ်ပေးတဲ့ပုံတွေက..မှားနေတယ်။အဲ့ဒါ အချစ်မဟုတ်ဘူး..အချစ်ဆိုတာ မပေးတတ်ရင် အချုပ်အနှောင်တစ်ခုနဲ့အလားတူတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ထဲကို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေ့တဲ့အခါ…. သူ့အကျင့်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီး သွတ်သွင်းလိုက်စရာမလိုဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပိုင်ဘူး။ အဆုံးစွန် ကျွန်တော်တို့မိဘတွေတောင် ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လို့လား? အရွယ်တစ်ခုရောက်ရင် လွှတ်ပေးရတာချည်းလေ..။ နည်းတူပဲ သူစိမ်းတစ်ယောက်ဆိုပိုလို့တောင်..ဆိုး…. သူမပေးချင်တဲ့ ဘယ်အရာကိုမှ ကျွန်တော်တို့က တောင်းယူလို့မရသလို…. သူ့မှာရှိတဲ့ အပြုအမူတွေကိုကအစ..ဒါမကောင်းဘူးလို့ငါထင်တယ်ဆိုပြီး သွားပြင်လို့မရဘူး…။ မကောင်းဘူးဆိုတာ…ခင်ဗျားထင်ရုံပါ..။သူ့အတွက်..ဒါဟာစိတ်ထွက်ပေါက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ခုတည်းသောပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်…။ ဒါဟာသူ့အတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တောင် ယုံလိုက်ပါ…. ကျွန်တော်တို့ထက် သူ့ကိုယ်သူ ပိုသိပါတယ်..။ချစ်ပေးတယ်ဆိုတာလေ… တစ်လောကလုံးနဲ့သူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်…တစ်ချက်ကလေးပြုံးပြတာ..။ … Read more
စီးပွားတတ်မဲ့အိမ်နှင့်ပက်သက်သော လောကီပညာ …အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်ရင်အဓိက(၃)ချက်
အိမ်​နှင့်​​ပက်သက်သောလောကီပညာ အိမ်​တစ်​အိမ်​ ​ဆောက်​ရင်​ အဓိက ( ၃ ) ချက်​ရှိတယ်​…. အိမ်​ ပနပ်​ အိမ်​ ဦးရင်​တိုင်​ ​လှေကား အဲ့ဒါ အဓိက ဘဲ။ ( မ​ဆောက်​​ကောင်း​သောအိမ်​များ ) အိမ်​ပျံ အိမ်​ရင်​ကွဲ အိမ်​ပလ္လင်​ အိမ်​ဖိုခ​နောက်​ အိမ်​နွား အိမ်​ပတ္တလား ​ကျောင်းနှင့်​တူ​သောအိမ်​ မ​ဆောက်​​ကောင်းပါ ။ ရင်​ကွဲ အိမ်​ (ကွဲ…​သေ) ဝါး​ခေါင်းထိုးဆက်​​သောအိမ်​ (ရန်​ဖြစ်​) သစ်​ဆက်​ဝါးဆက်​ ဆက်​​သောအိမ်​ (ရန်​ဖြစ်​) အဲ့အိမ်​​တွေမှာ ထုပ်​​ယောက်​ မိုက်​ဖွဲ့ပြီး ၃နဲ့စားလို့ပျက်​ရင်​ ၃လအတွင်း လူ​သေဖို့ ၁၀၀%ပါ…. အိမ်​ ပတ္တလား နဲ့ အိမ်​နွားက ဆင်းရဲရုံဘဲရှိတယ်​ …လူမခိုက်​ပါ…. အိမ်​မှာ သစ်​စုံပါရင်​ သစ်​မင်း စိုက်​ထားပါ။ အိမ်​ထက်​ အိမ်​သာ … Read more